OnlyOffice Desktop 6.2 efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
vao haingana ny famoahana ny kinova vaovao an'ny OnlyOffice Desktop 6.2 dia nambara izay napetraka natao hiara-miasa amin'ireo antontan-taratasy, takelaka ary famelabelarana an-tsoratra.
OnlyOffice milaza fa mifanentana tanteraka amin'ny endrika MS Office sy OpenDocument. Format miampy: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Azo atao ny manitatra ny fiasan'ny tonian-dahatsoratra amin'ny alàlan'ny plugins, ohatra, misy plugins azo hamoronana môdely sy manampy video YouTube.
OnlyOffice Desktop dia misy mpampanonta amin'ny Internet ONLYOFFICE Docs 6.2 Navoaka vao tsy ela ary manolotra ity vaovao manaraka ity.
Iray amin'izany ny fahaizana mampiditra sonia nomerika amin'ny antontan-taratasy, takelaka ary fampisehoana ho an'ny fanamarinana manaraka ny tsy fivadihana sy ny tsy fisian'ny fanovana raha oharina amin'ny tany am-boalohany nosoniavina. Mba hametahana sonia nomerika dia takiana fanamarinana navoakan'ny manampahefana fanamarinana hanao sonia ary ny sonia dia ampiana amin'ny alàlan'ny menio "Protection tab -> Signature -> Add digital digital signature".
Fiovana iray hafa aseho ny fanohanana ny fiarovana ny teny miafina ny antontan-taratasy, ny teny miafina dia ampiasaina hamehezana ny atiny, ka raha very dia tsy azo averina ilay rakitra. Ny teny miafina dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny menio «File tab -> Arovy -> ampio teny miafina».
Etsy ankilany, afaka mahita ny fampidirana amin'ny Seafile, sehatra fampifanarahana, fiaraha-miasa ary sehatra fitahirizana rahona ampiasain'ny teknolojia Git. Rehefa ampidirina ao amin'ny Seafile ny modely DMS (Document Management Systems) mifanaraka amin'ny Seafile, ny mpampiasa dia afaka manova antontan-taratasy voatahiry ao amin'ity fitahirizana rahona ity avy amin'ny OnlyOffice ary hiara-hiasa amin'ireo mpampiasa hafa. Raha te hifandray amin'ny Seafile dia safidio ny "Connect to Cloud -> Seafile" ao amin'ny menio.
Ho an'ny fanovana hafa naroso teo aloha amin'ny mpamoaka an-tserasera:
Manampy ny fampidirana latabatra isa, izay mitovy amin'ny tabilao atin'ny antontan-taratasy iray, ny tonian-dahatsoratry ny antontan-taratasy, fa kosa mitanisa ireo tarehimarika, tabilao, raikipohy ary latabatra izay ampiasaina ao anaty antontan-taratasy.
Ny fametrahana ny fanamarinana angon-drakitra dia niseho tao amin'ny processeur spreadsheet, ahafahanao mametra ny karazana data tafiditra ao anaty sela iray ao amin'ny latabatra, ary koa manome ny fahaizana miditra mifototra amin'ireo lisitra mitete.
Ny fikirakirana ny takelaka dia mampihatra ny fahaizana mampiditra slicers ao anaty latabatra pivot, ahafahanao manombatombana maso ny asan'ny sivana hahafantarana izay aseho.
Nanome fahaizana hanafoana ny fanitarana latabatra mandeha ho azy. Nampiana ny fivoarana, ny fironana, ny logger, ny tokana, ny MUNIT ary ny RANDARRAY. Nanampy ny fahaizana mamaritra ireo endrika nomerao anao manokana.
Ny bokotra iray hampiakarana na hampihenana ny endritsoratra dia nampiana ho an'ny tonian-dahatsoratra fampisehoana, ary koa ny fahaizana mandrindra ny endrika data ho azy rehefa manoratra ianao.
Niampy fahaizana mampiasa Tab sy Shift + Tab amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra isan-karazany.
1 Ahoana no hametrahana Onlyoffice Desktop Editors 6.2 amin'ny Linux?
1.1 Fametrahana avy amin'ny Snap
1.2 Fametrahana amin'ny alàlan'ny fonosana DEB
1.3 Fametrahana amin'ny alàlan'ny fonosana RPM
Ahoana no hametrahana Onlyoffice Desktop Editors 6.2 amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana te-hanandrana ity efitrano fiasan'ny birao ity na hanavao ny kinova misy azy amin'ity vaovao ity, Azon'izy ireo atao izany amin'ny fanarahana ireo dingana zarainay etsy ambany.
Fametrahana avy amin'ny Snap
Fomba tsotra iray hafa ahafahana manana an'ity rindranasa ity amin'ny fizarana Linux rehetra miaraka amin'ny fanampian'ny fonosana Snap, noho izany Mila manana ny fanohanana fotsiny ianao hahafahana mametraka apetrak'ity karazana ity amin'ny rafitrao.
Ao amin'ny terminal dia tsy maintsy soratanao izao baiko manaraka izao hanatanterahana ny fametrahana:
Fametrahana amin'ny alàlan'ny fonosana DEB
Raha toa ka mpampiasa Debian, Ubuntu na fizarana misy fanohanana ny fonosana deb izy ireo dia afaka ampidino avy ao amin'ny terminal ny fonosana fampiharana miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Aorian'ny fisintomana dia azonao atao ny mametraka miaraka amin'ny:
Raha manana olana amin'ny fiankinan-doha ianao dia afaka mamaha azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Fametrahana amin'ny alàlan'ny fonosana RPM
Ary farany, ho an'ireo mpampiasa RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE na fizarana rehetra misy fanohanana ireo fonosana rpm, dia tokony hahazo ny fonosana farany izy ireo ny baiko:
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia afaka atao miaraka amin'ity baiko manaraka ity ny fametrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » OnlyOffice Desktop 6.2 efa navotsotra ary izao ny vaovaony
Czkawka: Fampiharana tsotra sy haingana hamafana ireo rakitra ao amin'ny Linux